Kdenlive 20.12 waxay la timid horumarin loogu talagalay abuurista saamaynta, cinwaanada iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Kuwa horumariya mashruuca KDE waxay sii daayeen tifaftiraha fiidiyowga ee Kdenlive 20.12, kaas oo loo qoondeeyay adeegsiga nus-xirfadeed, wuxuu taageerayaa ka shaqeynta duubista fiidiyowga qaababka DV, HDV iyo AVCHD, wuxuuna siiyaa dhammaan howlaha tafatirka fiidiyowga ee aasaasiga ah, tusaale ahaan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku darto fiidiyowga, codka iyo sawirada si aan kala sooc lahayn u isticmaalaya jadwalka iyo sidoo kale saameyn badan.
Kuwa aan ka warqabin Kdenlive, waa inaad ogaataa taas tan waa tifaftire muuqaal furan oo bilaash ah loogu talagalay GNU / Linux iyo FreeBSD waxayna ku tiirsan tahay mashaariic kale oo furan sida FFmpeg, qaabka fiidiyowga ee MLT, iyo saamaynta frei0r.
1 Wararka ugu muhiimsan ee Kdenlive 20.12
2 Sidee loo rakibaa Kdenlive 20.12 Linux?
Wararka ugu muhiimsan ee Kdenlive 20.12
Qaabkan cusub waxaa lagu muujiyay in ku daray shaqeynta kala guurka isla wadada kaliya ee abuurista waxtarka leh u guuritaanka jajabka Halkii aad ka hagaajin lahayd meelaha isdhaafsan ee ku yaal laba shaashadood, muuqaalka cusub wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u dejiso mudada kala guurka oo aad doorato meel goos goos ah oo go'aamisa ugu sarreysa xilliga kala-guurka markii aad hal clip ku beddesho mid kale.
Qalab cusub ayaa loo soo jeediyay in lagu daro oo wax laga beddelo cinwaanada, lagu dhexgeliyey waqtiga oo lagu hirgeliyey qaab waddo gaar ah iyo qalab cusub, oo lagu daray Waxay taageertaa soo dejinta subtitles qaab SRT / dameer kuna dhoofin qaab SRT ah. Si aad u bedesho qaabka iyo midabka qoraalka, waxaad isticmaali kartaa HTML tags.
Dhammaan saamaynta waxaa loo qaybiyaa qaab-dhismeed qeexan oo faahfaahsan. Dhamaan saameynta iyo xuduudahooda waa la cusbooneysiiyay. Saamaynta la heli karo ayaa hadda la muujiyaa iyada oo ku saleysan waafaqsanaanta shaqadooda la xiriirta ee nidaamka qalliinka hadda socda. Dhibaatooyinka jaban iyo dhibaatooyinka ayaa loo wareejiyay qayb gooni ah oo saamayn hoos u dhac ah oo sugeysa in laga saaro sii deynta mustaqbalka.
Waxaa kale oo lagu xusay in swaxaan hirgeliyay saameyn cusub:
Tiirka Echo si loo buuxiyo aagagga dhinacyada fiidyowyada toosan oo leh qaab cilladaysan
VR 360 iyo 3D si ay ula shaqeeyaan muraayadaha stereoscopic iyo saddexda cabbir leh
Barbaraha fiidiyowga si uu ula qabsado dhalaalka, isbarbar dhiga, dhererka iyo midabka
Dalagyada ay buuxinayso Fill waxay awood u leedahay inay ku soo xirto keyframes.
Awooda lagu daray ee loogu magacdaray saamaynta caadada oo kudar / tafatir sharaxaada iyaga.
Shaqada ayaa la qabtay si loo hagaajiyo isticmaalka waqtiga oo la kordhiyo ka jawaab celinta interface-ka. Clips goos gooska waqtiga ayaa hada badalaya midab ku saleysan astaamaha ku lifaaqan ee gudiga mashruuca.
Lagu daray awooda lagu xakameyn karo ka mid noqoshada caadi u yeelida dhawaaqa cinwaanka wadada.
Taageero dheeraad ah loogu daray tirtirida dhowr wado oo isku mar ah.
Wadahadalka si loo abuuro mashruuc mashruuc, ikhtiyaar u leh in lagu kaydiyo kali-keliyeyaasha ku jira waqtiga ayaa la hirgeliyey, iyo sidoo kale ikhtiyaar lagu doorto qaabka TAR ama ZIP.
Qalabka ilaha internetka ayaa loo gudbiyay qtwebengine waxaana loo bedelay kaydinta kheyraadka HTTPS.
Sidee loo rakibaa Kdenlive 20.12 Linux?
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay soo rogaan nuqulkan cusub, Waa inaad raacdaa tilmaamaha aan kula wadaageyno xagga hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Kdenlive 20.12 waxay la timid horumarin loogu talagalay abuurista saameyno, cinwaanno iyo inbadan
Burburka SolarWinds wuxuu noqon karaa mid aad uga xun sidii la filayay